सभामुखमाथि नैतिकताको प्रश्न राख्ने सांसदको भनाइ रेकर्डबाटै हटाउन आदेश - Samadhan News
सभामुखमाथि नैतिकताको प्रश्न राख्ने सांसदको भनाइ रेकर्डबाटै हटाउन आदेश
समाधान संवाददाता २०७८ जेठ १९ गते १५:५४
गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य मनबहादुर गुरुङले आफूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सांसद गुरुङको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन आदेश गरेका छन् । सांसद गुरुङले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि १६ वैशाखमा मत विभाजन हुने गरी निर्धारित प्रदेश सभा बैठक कसले आकस्मिक रुपमा स्थगन गरेको थियो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद गुरुङले सत्तापक्षमाथि नैतिक प्रश्न गरिरहँदै १६ वैशाखको घटना स्मरण गरेका हुन् । उक्त दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मत विभाजन गर्ने कार्यसूची थियो ।
प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशनमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ । बैठक फेरि भोलि बिहीबार बस्दैछ । बुधबारको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीबाट विश्वासको मत नै नलिई सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा लागेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
सांसद गुरुङले निम्न प्रश्न सभामुखमाथि उठाएका थिएः
सभामुखज्यू हामीले वैशाखको १३ गते विशेष अधिवेशन बोलाएको होइन ?
केको लागि बोलाएको विशेष अधिवेशन माननीयज्यूहरु ?
अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न होइन ?
१५ गते मतदान हुने भनेर कार्यसूचीमा आइसकेको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने कार्यक्रमलाई एकाएक सत्तापक्ष वा सरकारले सूचना टाँस गरेको हो ?
यसमा नैतिकता छ भने कार्य व्यवस्थामा बस्नेहरुले राजीनामा दिनुपर्दैन ?
त्यो कोकोले राजीनामा दिनुपर्दैन ?
यी प्रश्न उठाएपछि सभामुखले नियमावलीअनुसार बोल्न सांसद गुरुङलाई आग्रह गरे । गुरुङले सरकार संविधानको १६८ को उपधारा ४ बमोजिम बनेको हुँदा वैधानिक भएको सुनाए ।
उनले भनाइ टुंग्याइसकेपछि सभामुखले गुरुङको भनाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन आदेश गरेका हुन् ।